Kufe 3 engozini yezimoto ezingu-18 - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto Kufe 3 engozini yezimoto ezingu-18
July 4 2012 at 11:40am Comment on this story
ingozi eyenzeke ku-N2 eThekwini idlule nemiphefumulo yabantu abathathu izolo ntambama.
ISIPHIHLI sengozi eyenzeke emgwaqweni onguthelawayeka u-N2 eThekwini sidlule nemiphefumulo yabantu abathathu izolo ntambama. Kule ngozi kumbondelane izimoto ezingu-18 kwalimala kabi abantu abayisithupha. Enye yezimoto ezibandakanyeke kule ngozi ingene ngaphansi kweloli. UMnuz Derrick Banks, wezimo eziphuthumayo kwa-ER24, uthe bathole abantu abathathu kuhlanganisa nengane kubo ababelimele kanzima kodwa ababange besakwazi ukubasiza ngoba bese beshonile. Uthe kuze kwadingeka ukuthi kusetshenziswe izindlawu ukutakula abebevaleleke ezimotweni. Kukholakala ukuthi iloli libe nenkinga yamabhuleki liqhamuka entabeni, umshayeli walo wangabe esakwazi ukulilawula. Kuthiwa iloli lishosholoze laze layoshayisa izimoto emgwaqweni, ezinye lizihudula njengoba laba abashonile bebesemotweni ebingaphansi kwalo. Kuze kwadingeka ukuthi kubuye kusetshenziswe izicishamlilo ukuze kubhulwe umlilo oqubuke kwenye yezimoto kusha abebephakathi. UBanks uthe amaphoyisa nezinhlaka ezithintekayo basazophenywa ukuthi le ngozi yenzeke kanjani. Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / Kufe 3 engozini yezimoto ezingu-18 We like to make your life easier